Charles Taylor: Satria mandeha ny tantara · Global Voices teny Malagasy
Charles Taylor: Satria mandeha ny tantara
Voadika ny 16 Aogositra 2018 11:30 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2006)
Tamin'ny Aogisitra 2003, nentina tamin'ny Boeing 727 fiaramanidin'ny filoham-pirenena Nizeriana i Charles Taylor, Liberiana mpitondra taloha, avy tao Monrovia nankany Abuja. Vao nahazo fialofana tany Nizerià tao anatin'ilay fifanarahana teo ambany fiahian'ny Firaisambe Afrikana, ny Firenena Mikambana (ONU) sy Etazonia i Taylor, izay natao mba hanajanonana ny ady an-trano tao Liberia. Na izany aza, tamin'ny Jona 2003, nampangain'ny fitsaran'ny Firenena Mikambana tao Sierra Leona ho nanao helobe bevava an'ady i Taylor ary nalefa ny taratasy fampisamborana azy. Nampanantena ny hanolotra an'i Taylor ny fanjakana Nizeriana, saingy rehefa tafatsangana ao Liberia ny fanjakana nofidiana tamin'ny fomba demokratika.
Janoary 2006: Nampianiana ho amin'ny toerana filoha voafidy tao Liberia i Ellen Johnson-Sirleaf. Tamin'ny 5 Martsa 2006, nangataka tamin'ny fanjakana Nizeriana ny famonjàna an'i Charles Taylor izy (araka ny vaovao tao amin'ny tranonkalan'ny State House, Abuja). Tamin'ny 28 Martsa 2006, nilaza ny fanjakana nizeriana fa nanjavona tao amin'ny trano fialofany i Charles Taylor. Andro iray taorian'izay, nosamborina teny am-piezahana hitsoaka an'i Nizeria izy. Amin'ny fotoana anoratana ity tatitra ity, mety efa an-dalana mankany Liberia izy — toa nifanaraka tamin'ny fangatahan'ny fanjakana liberiàna amin'ny fanolorana azy ihany ny fanjakana nizeriana.
Feno tatitra sy fanehoankevitra voalalina tsara momba ilay liberiàna mpitarika taloha sy lehibe an'ady efa voampanga ny tontolon'ny blaogy amin'ny teny Anglisy. Mijery ny sasany amin'izy ireny izahay, nosoratana mialohan'ny fanambaràna hoe voasambotra Atoa. Taylor.
Itarainan'ny blaogy GlobalLawAndPolitics ao amin'ny lahatsoratra ”‘Ny Fiakarana sy Fianjeran'ny Lalàna Iraisam-pirenena ao Afrika–Martsa 2006” ny mikasika ny fomba fanohizan'ireo ”olobe” ao Afrika ny fombany, famahanan-dry zareo ny ”kolontsain'ny tsimatimanota sy feno kolikoly izay manimba ny kaontinanta” . Manao fanamby amin'ireo Afrikana mpitarika izy mba hanatontosa ny andraikiny mifanaraka amin'ny zon'olombelona amin'ny fandàvana tsy hanome fialofana an'Atoa. Taylor.
Faritan'ny Transitional Justice Forum ho toy ny ”mora miovaova hevitra” ny fihetsik'i Nizeria taorian'ilay fangatahan'i Liberia ho fanolorana mpitsoa-ponenana voaheloka. Miantso ny filoha George Bush mba tsy hanao fivoriana miaraka amin'ny filoha nizeriana izy (voalahatra hatao ny 29 Martsa 2006) raha tsy hita sy voasambotra i Taylor.
Mamaritra ny fanjavonan'i Taylor ho toy ny ”fahatairana be tsy misy ohatr'izany” ny Black Star Journal , milaza fa tokony nisambotra ary nandefa an'i Taylor tamin'ny fiaramanidina ho ao Sierra Leona araka ny fangatahan'i Liberià i Nizerià. Manohitra ny filoha nizeriàna ny Africa Beat tamin'ny tsy nisamborana an'i Charles Taylor talohan'ny fanambaràny ampahibemaso ny fikasany hanolotra azy any Liberià.
Antsoin'ny Nigerian Times ny Firenena Mikambana mba hitazona ny filoha Nizeriàna ho tomponandraikitra tamin'ny fanjavonan'i Charles Taylor, toa tsy manana fangorahana ho an'ny fanjakàna nizeriàna. Ny African Shirts, tao anatina lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ”Nanjavona i Taylor”, dia mamaritra ilay toe-javatra iray manontolo ho toy ny ”fampisavorovoroana tanteraka”.
Tezitra amin'i Nizerià i David McCullough taorian'ny fanjavonan'i Taylor. Toa kivy izy amin'ilay toa ”fitsikombakomban'i Nizerià amin'i Charles Taylor” sy ny famelàna azy hitsoaka . Apetrak'i McCullough ho ao anatin'ny kilasin'ny jiolahy an'ady toa an'i Radovan Karajic avy ao Serbia i Taylor ary miantso an'i Nizerià tratran'ny ”kolikoly” mba hanadio ny fihetsiny.
Araka ny tatitra izay milaza fa tratra ary nogadrain'ny polisy Nizeriàna tamin'ny 29 Martsa 2006 i Charles Taylor, feno fanehoankevitra maro ihany koa ny tontolon'ny blaogy.
Mamintina ny fihetsehampo amin'ny ankapobeny teny anivon'ireo blaogera ny Parenthetical Remarks amin'ny filazana hoe: ”lasa andro tsara ho an'ny sisa amintsika ny andro ratsy ho an'ireo mpanao didy jadona teo aloha. Handany andro manoloana ny fitsarana amin'izay i Taylor no niafaràny, mety arahan'ny fighadràna mandram-pahafaty, izay toerany mendrika azy.” Milaza ny Mental Meanderings fa tokony hisintona lesona avy amin'i Nizerià i Serbia, izay miaro foana olona toa an'i Ratko Mladic ary hanolotra ireo jiolahy an'adiny.
Somary mampiditra ny zava-misy amin'ny fomba manesoeso ny Mansel Report amin'izao efa nahasamborana an'i Charles Taylor izao, hoe azon'ny filoha nizeriàna atao ny miandrandra fivoriana tsara miaraka amin'i George Bush izay ”hiresahana ny solika…” sy ny ”herisetra sy fahafatesana [tao amin'ny Niger Delta tao Nizerià].
Mampitandrina ny fanjakana Amerikana amin'ny fifandraisany amin'ny filoha Nizeriàna, miantso ”famerenana fandinihana ny fifandraisana akaiky sy tsy miankina eo amin'i Nizerià sy Etazonia ny The Counterterrorism Blog, raha sady faly tamin'ny fisamborana an'i Taylor nataon'ireo mpitandron'ny filaminana Nizeriàna no sady efa eny an-dàlana hankany Sierra Leona.
Misy blaogera mahita ny fangatahana fampodiana an'i Charles Taylor ho toy ny lasa aloha loatra sy tondro manambara ny famoretana ataon'ireo fanjakana maherihery kokoa. Mahita ny fiovana tampoky ny fon'ny filoha Liberiàna ho toy ny mampiahiahy ny Grandiose Parlor. Indray andro, laharam-pahamehana tsy dia lehibe ho an'ny fanjakany no fahitàn'ny filoha Liberiàna an'i Taylor.
6 andro izayAngola